हाम्रा स्पष्ट फ्रोस्टेड वा ठोस सेतो प्लास्टिक व्यवसायिक कार्डहरू छनोट गरेर तपाईंका कार्डहरू टिकाउ, लचिलो, वाटरप्रूफ र सुपर अद्वितीय छन् भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
घर / व्यापार कार्ड / प्लास्टिक व्यापार कार्ड
कुनै पनि आकारक्रेडिट कार्ड आकारयूरोमानकस्क्वायरमिनी
कुनै पनि मोटाई११20० pt११30० pt
कुनै पनि उत्पादन समय5 -7कार्य दिनहरू12 - 15 कार्य दिनहरू
प्लास्टिक व्यापार कार्डहरू खाली गर्नुहोस् - 20 pt
बाट मूल्य: 129.00$ - 249.00$
मोटाई: ११20० pt
आकार: मानक, स्क्वायर, मिनी
उत्पादन समय:5-7कार्य दिनहरू
बाट मूल्य: 199.00$ - 339.00$
मोटाई: ११30० pt
आकार: क्रेडिट कार्ड आकार
प्लास्टिक व्यापार कार्डहरू खाली गर्नुहोस् - 30 pt
बाट मूल्य: 249.00$ - 399.00$
कालो प्लास्टिक व्यापार कार्ड
बाट मूल्य: 89.00$ - 169.00$
आकार: यूरो, मानक, स्क्वायर, मिनी
प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू सँधै बजारमा हुने छन्। सरल तर प्राय: पटक रमाइलो हेराईले धेरै कम्पनीहरूका लागि यो हुनुपर्दछ।
हाम्रो लागि यहाँ peppermint, प्लास्टिक कार्डहरू हामीले गर्ने कामको अंश हुन्। चाहे तपाईंसँग बनाउनको लागि अनुकूलन प्लास्टिक कार्ड होस् वा सेतो प्लास्टिक कार्ड, हामीसँग सधैं तपाईंको पछाडि हुनेछ।
के तपाईं चाँडै प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड किन्न योजना गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन हामी विश्वास गर्दछौं जुन तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ।
हाम्रो प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरूका बारे सोध्न सक्ने प्रश्नहरू
यहाँ केहि प्रश्नहरू छन् जुन तपाईले हामीलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ।
के प्लास्टिक प्लास्टिक कार्ड यति विशेष बनाउँछ?
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन प्राय व्यवसायहरूले उनीहरूको कार्ड डिजाइन र सामग्रीको लागि प्लास्टिक प्रयोग गर्छन् वा जब व्यापार कार्ड प्रिन्ट गर्दै। तिनीहरू समावेश छन्
प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड एक अपीलिंग र नवीन डिजाइन छ। उनीहरूले तपाईंको व्यवसाय कार्डलाई भीडको माझमा राख्छन्। यदि तपाईं आफ्नो व्यापार कार्ड प्रिन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए यो विचार गर्न लायक छ।
प्लास्टिकबाट बनेको व्यवसाय कार्ड अत्यधिक विस्तृत हुने छ। यो सजिलैसँग राम्रो पहिलो छाप बनाउन वा ग्राहकहरूमा स्थायी बनाउन सक्छ।
एक प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड विविधता को एक धेरै संग आउँछ। तपाईं फ्रोस्टेड प्लास्टिक, स्पष्ट प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, र अन्य बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ वास्तवमै केहि छैन जुन तपाईंको कार्ड डिजाइनसँग यति धेरै विस्तृत विवरणसहितको गुणस्तरको आवाज निकाल्दछ।
तपाईंसँग प्लास्टिक व्यापार कार्ड प्रिन्टिंग उद्योगमा के विकल्पहरू छन्?
त्यहाँ प्लास्टिक विधि कार्ड प्रिन्टिंग उद्योगमा धेरै विधिहरू वा प्रविधिहरू छन्। यी विकल्पहरूले तपाईंलाई तपाईंको प्लास्टिक कार्डलाई तपाईंको इच्छा अनुसार कुनै पनि हिसाबले अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ।
प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड हटाउनुहोस्
तपाईंसँग पहिलो विकल्प भनेको स्पष्ट प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड हो। यसलाई पारदर्शी प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड पनि भनिन्छ। यस कार्डको एक मुख्य लाभ यसको उपस्थिति हो।
यसैले, प्रायः ग्राहकहरूले यसलाई यसको उपस्थितिको लागि मात्र जान दिँदैनन्।
फ्रोस्टेड प्लास्टिक व्यापार कार्ड
फ्रोस्टेड प्लास्टिक अर्को विकल्प हो जुन पक्का टेबुलमा छ। यो प्रिन्टि technique टेक्नीकले तपाईंको व्यापार कार्ड अधिक टिकाऊ बनाउँछ। खाली फ्रोस्टेड प्लास्टिक कार्डहरू निश्चित रूपमा विचार गर्नुपर्ने कुरा हो।
सेतो प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड
अर्को विकल्प भनेको सेतो प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरूमा जानु हो। यो प्लास्टिक कार्ड धेरै सुरुचिपूर्ण र सरल छ। यदि तपाईं केहि चाहानुहुन्छ कि प्रयास नगरीकन लालित्य चिच्यायो भने, सेतो प्लास्टिक जाने सही तरिका हो।
त्यसैले केहि चाँडै सेतो प्लास्टिक कार्ड प्रयास गर्नुहोस्।
प्लास्टिक कार्डको लागि प्रयोग गर्नका लागि उत्तम आकार के हो?
विचार गर्न पहिलो सुविधाहरू मध्ये एक आकार हो। त्यहाँ आयत सबैभन्दा मनपर्दो आकृतिहरू मध्ये एक हो। यो एक व्यापार कार्ड को लागी सबै भन्दा राम्रो आकार हो। यसले विवरणहरू पनि स्पष्टसँग देखाउँदछ।
जबकि अधिकांश व्यक्तिहरू प्लास्टिक कार्डको लागि आयत रुचाउँछन्, त्यहाँ अझै तपाईंको आकारको संख्याहरू छन् तपाईंको प्लास्टिक कार्ड डिजाइन गर्न।
तपाईं पनि अनुकूलन कार्डको लागि जान रोज्न सक्नुहुन्छ। आकार वा डिजाइन छनौट को प्रकार तपाइँको ब्रान्ड संग गुन्जाउनु पर्छ
मुद्रित व्यापार कार्डहरूका लागि उत्तम ढाँचा के हो?
मुद्रित व्यापार कार्डहरूको लागि उत्तम ढाँचा TIFF वा PDF हो। केहि व्यक्तिहरु लाई उनीहरु को ब्यापारिंग प्रिन्टिंग को लागी उनीहरुको व्यापार कार्डहरु लाई मिल्छ। हामी तपाईंलाई भेरिएबल प्रिन्टि fromबाट के आशा गर्ने भन्ने बारे पूर्ण गाईड दिन सक्दछौं।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो मिशन र लक्ष्यहरू बुझ्नुहुन्छ व्यापार कार्ड छनौट गर्नु अघि। प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड राम्रो को लागी तपाइँको व्यवसाय परिवर्तन गर्न सक्दछ।
के तपाइँ गोलाकार कुनाहरू भएको प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरूको लागि जानु पर्छ?
धेरै व्यक्तिहरू फेला पार्दछ कि गोलाकार कुनाहरू उनीहरूका लागि उपयुक्त छन्। राउन्ड कुनाहरू भएको प्लास्टिक कार्ड प्रयोग गरेर तपाईंले यहाँ प्राप्त गर्नुहुने केही लाभहरू छन्।
गोलाकार कुनाहरूले तपाईंको कार्डहरूलाई चल्तीको रूप दिन्छ। यदि तपाईंको संगठन यसमा फस्टाउँछ भने, त्यसो भए यो तपाईंको लागि मात्र उत्तम विकल्प हो।
यसले तपाईंको कार्डलाई टिकाऊ देख्दछ। गोलाकार कुनाहरूले कार्डहरू ठोस र राम्रोसँग निर्मित देखिन्छ। त्यसो भए, यदि तपाइँ कुनै पनि समयमा तुरुन्तै प्रिन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, यस प्रकारको डिजाइन विचार गर्न सहयोगी हुन सक्छ।
गोलाकार कुनाहरू कार्डको साथ राम्रोसँग जान्छ जुन आयतको आकार हुन्छ। यसले तपाईंको कार्ड विवरणहरूलाई अलग देखिने अनुमति दिन्छ।
व्यापार कार्डका लागि पेपर सामग्रीको उत्तम प्रकार के हो?
ब्यापार कार्डका लागि त्यहाँ कुनै राम्रो प्रकारको कागज छैन। यो केवल तपाइँको प्राथमिकता मा निर्भर गर्दछ। हामी तपाईंबाट छनौट गर्नका लागि अनुकूलन कागज प्रकारहरूको होस्ट प्रस्ताव गर्दछौं।
यी कागज सामग्रीहरू सबै टिकाऊ हुन् र विभिन्न आकारहरूमा आउँदछन्। यहाँ तिनीहरू मध्ये केही छन्।
हामी र colors्गको एक होस्ट पनि प्रदान गर्दछौं। यदि तपाईंसँग कस्टम र color छ भने हाम्रो विकल्पमा सूचीबद्ध गरिएको छैन, तपाईं जहिले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंको व्यवसाय कार्डहरूको लागि यो अनुकूलन रंग प्रयोग गर्न पाउँदा खुसी हुनेछौं।
वाटरप्रुफ सामग्री प्रयोग गर्न को लागी के शुल्कहरु छन्?
जब तपाईं एक वाटरप्रूफ सामग्रीको साथ केही भव्यता आदान प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ, यो अविश्वसनीय रूपले उपयोगी साबित हुन सक्छ। यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन यो सम्भव छ।
वाटरप्रूफ सामग्रीका साथ तपाई कठोर मौसमको स्थिति बारे धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। मूल्य र गुण स्थिर छ।
यसले मूल्य र मूल्य बढाउँदछ
यो सजिलै तपाइँ तपाइँको पैसा को लागी अधिक मूल्य दिन्छ। तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू समयको परीक्षणमा उभिनेछन्।
यदि तपाइँसँग व्यापार कार्ड प्रिन्ट गर्नका लागि यस सामग्रीको मूल्यको बारेमा केहि प्रश्नहरू छन् भने हामीसँग सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
के तपाई नि: शुल्क अर्डरहरू दिनुहुन्छ?
होइन, हामी गर्दैनौं। यद्यपि उच्च-अन्तमा हामी आफ्ना ग्राहकहरूलाई धेरै छुट र उपहार दिन्छौं। थप जानकारीको लागि तपाईले हाम्रो वेबसाइट जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
क्लियर गर्नुहोस् वा फ्रोस्टेड - के भिन्नता छ?
के तपाईं स्पष्ट र फ्रोस्टेड व्यापार कार्ड बिच अडिनुभयो? सर्वप्रथम, थाहा पाउनुहोस् कि तपाईले जे पनि छनौटले ब्यापार कार्डको क्वालिटीमा असर गर्दैन।
यहाँ दुबै प्रविधि बीच केही भिन्नताहरू छन्।
स्पष्ट व्यवसाय कार्डहरूमा WOW कारक छ। सामना गरौ। धेरै व्यक्तिले पहिले स्पष्ट प्लास्टिक कार्ड देखेका छैनन्। तपाईंको ग्राहक तुरून्त तपाईंको कार्डको गुणस्तर र सुविधाहरूबाट प्रभावित हुनेछ।
स्पष्ट प्लास्टिकको विपरीत, स्पष्ट फ्रोस्टेड प्लास्टिक व्यवसाय कार्डले तपाईंको ग्राहकहरूलाई प्रिमियम अनुभव दिनेछ। अधिकांश फ्रोस्टेड व्यापार कार्ड मैटबाट बनेको हुन्छ। यसले गुणस्तरलाई फरक स्तरमा लैजान्छ।
कुनमा अधिक रंग छ?
फ्रोस्टेड व्यापार कार्ड स्पष्ट प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड भन्दा रंगीन छन्। फ्रोस्टेड व्यापार कार्डको साथ, तपाईं यसको स्तरमा अर्को स्तरमा लिनको लागि पूर्ण रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
किन तपाईंले विश्वास गर्नु पर्छ Print Peppermint?
यहाँ केहि कारणहरू छन् जुन तपाईले हामीलाई प्लास्टिकको व्यापार कार्डका साथ विश्वास गर्नुपर्दछ।
उत्पाद गुणवत्ता र डिजाइन
हाम्रो प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड प्रिन्टिंग प्रक्रियाहरू उत्पादको गुणवत्ता र डिजाइनमा आधारित छन्। यसैले, तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि हामीद्वारा गरिएको कुनै पनि छापिएको कार्ड वा डिजाईनमा अविश्वसनीय सुविधाहरू र सामग्रीहरू छन्।
हामी केवल उत्तम प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू सिर्जना गर्न चाहान्छौं।
उत्कृष्ट ट्र्याक रेकर्ड
हामी केहि समय को लागी गरीरहेका छौं। यसले हामीलाई धेरै सम्मानित ब्रान्ड निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ। हामी प्रत्येक ग्राहकलाई दिन्छौं जुन हामीसँग उस्तै ध्यान र ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यसैले, हामी हाम्रो ग्राहकहरु मा एक स्थायी प्रभाव बनाएको छ।
यसले धेरै बर्षमा stars तारे ग्राहक समीक्षाको नेतृत्व गरेको छ। ती stars तारा समीक्षा हाम्रो कम्पनीको यहाँ गरेको राम्रो कामको प्रमाण हो Print Peppermint.
यो कम्पनी सेवा र यो प्रदान गर्दछ गुणवत्ता मा कुशल छ। यसले हाम्रो परिवर्तनको समय र हाम्रो सेवाको पारदर्शी प्रकृतिमा देखाउँदछ।
जबकि सटीक टर्नआराउन्ड समय तपाईले सिर्जना गर्नु भएको अर्डरमा निर्भर गर्दछ, हामी यो निश्चित गर्छौं कि सटीक रूपान्तरण समय पहिले र सम्भव छ।
यस कम्पनीको पृष्ठभूमिले हामीलाई देखाउँदछ कि कसरी महत्त्वपूर्ण ग्राहक सेवा। यसैले हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि हामी सहयोगी सल्लाह दिन्छौं जब आवश्यक हुन्छ।
यसले कम्पनीको रूपमा हाम्रो अखण्डता र पारदर्शी प्रकृति देखाउँदछ।
म कसरी सुरू गर्न सक्छु?
सुरू गर्नका लागि तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्नु पर्छ। यो सजिलै अनलाइन गर्न सकिन्छ। तपाईं हाम्रो वेबसाइट मा हेड र खाता बनाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईसँग अनलाईन खाता भएपछि तपाईले हामीसँग भएका बिभिन्न विकल्पहरूको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
अनलाइन, तपाईलाई हाम्रो टेम्प्लेटहरू पनि हेर्न अनुमति छ। तपाईंको लागि चीजहरू सजिलो बनाउनको लागि, हाम्रा टेम्पलेटहरू धेरै जसो एउटा फाईलमा संकलित गरिएको छ। तपाईं यसलाई हाम्रो स्टक हेर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टक जान्नु तपाईंलाई सही छनौट गर्न अनुमति दिनेछ
यदि तपाईं आफ्नो प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरूको लागि चाहानुभएको सामग्रीको प्रकारको बारेमा निश्चित हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ एउटा खण्ड छ जसले तपाईंलाई मनपर्ने सामग्री छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। यसले तपाइँलाई मनपर्दो डिजाइन र गुणवत्ता राख्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं अन्य विकल्पहरू पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि स्पष्ट वा फ्रोस्टेड, गोलाकार कुनाहरू वा कागजको रंग प्रयोग गर्न।
एक पटक तपाईको अर्डर वा डेलिभरी प्राप्त भएपछि तपाईले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने हुन्छ कि यो डेलिभर भएको छ। जब तपाईं हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, तपाईं नेतृत्व-डाउन प्रक्रियाहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
म कसरी मेरो प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरूको लागि भुक्तान गर्न सक्छु?
एकपटक तपाईं के मनपर्‍यो भन्ने अर्डर सिर्जना गर्नुभयो, यो तपाईंको खरीदको लागि भुक्तान गर्ने समय हो। एउटा विकल्प भनेको तपाईको क्रेडिट कार्डबाट भुक्तान गर्नु हो। क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नु हाम्रो मनपर्ने विकल्प हो। एक क्रेडिट कार्ड बाहेक, डेबिट कार्ड जस्ता अन्य विकल्पहरूलाई पनि अनुमति छ।
यद्यपि, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नु मात्र एक सहज प्रक्रिया हो।
तपाईंको प्लास्टिक कार्ड तयार हुन कति समय लाग्छ?
यसले business व्यवसाय दिनहरू भन्दा छोटो लिन सक्दछ वा त्यो भन्दा लामो लामो मार्ग लिन सक्दछ। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईंको प्लास्टिक कार्डहरू तयार हुन जाँदा निर्धारण गर्छन्।
अर्डरको मात्राले यो पनि निर्धारण गर्दछ कि यदि तपाइँको अर्डर चाँडै आउँदछ कि हुँदैन। यदि मात्रा थोरै छ भने, तपाईं यसलाई धेरै छिटो आउन आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
जहाँ तपाइँ बस्नुहुन्छ जहाँ तपाइँको व्यवसाय कार्ड आशा गर्न मा एक भूमिका खेल्छ। प्राय: जसो, तपाइँको कार्ड प्रिन्टको लागि तयार हुन सक्छ र बाहिर पठाइन्छ। यद्यपि तपाईको गन्तव्यमा पुग्न यसले लामो समय लिन सक्दछ।
विशेष प्रकारको पेशेवर डिजाइनले तपाईले छान्नु हुने घण्टाको संख्या निर्धारण गर्दछ जुन प्रत्येक प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड प्रिन्ट गर्न प्रयोग गरिने छ।
हाम्रो कलाकृति दिशानिर्देश के हो?
को पृष्ठभूमि Print Peppermint एक कलाकृति फाइल को आवश्यकता बुझ्न हामीलाई मद्दत गर्दछ। यस फाईलले हामीलाई र ग्राहकहरूलाई हामीले सेता प्लास्टिकको रूपमा अनुसरण गरेको नियमहरू बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ, पूर्ण रंग छनौट गरेर वा हाम्रो स्टक खरीद गर्न। हाम्रो स्टक वा दिशानिर्देशहरूको बारेमा बढि जान्नको लागि, तपाईंले हाम्रो टेम्पलेटहरू जाँच गर्नुपर्नेछ।
यहाँ यी दिशानिर्देशहरू केहि हुन्।
फन्ट आकार र पूर्ण रंग
कार्ड प्रिन्ट गर्दा तपाईले यसको फन्ट साइज र पूर्ण रंगमा ध्यान दिनु पर्छ। एक उच्च-फन्ट फन्ट साइज वा विशेष पूर्ण रंग छनौटले तपाईंको कार्डलाई तोड्न वा सिर्जना गर्न सक्दछ। त्यसोभए प्रिन्ट गर्ने बेलामा यो दिमागमा राख्नुहोस्।
कहाँ छ Print Peppermint स्थान छ?
Print Peppermint संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थित छ। धेरै समय अगाडि हामी डलासमा बसोबास गरेका थियौं। यसैले, हाम्रो सदरमुकाम डलास टेक्सासमा जिप कोड Tx 75208 XNUMX०XNUMX को साथ छ। त्यसैले पेपरप्रिन्ट प्रिन्ट गर्नुहोस्, त्यसकारण, सबै दिशानिर्देशहरू पालना गर्दछ जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवस्थित कम्पनीहरूमा लागू हुन्छ।
स्पष्ट व्यवसाय कार्डहरू केवल सब भन्दा राम्रो चीज हो!
जब तपाईं आफ्नो सम्भाव्य अर्ध-अर्ध पारदर्शी स्पष्ट फ्रोस्टेड प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, तपाईं आफैंलाई शुरूदेखि नै सफल सम्बन्धको लागि सेट अप गर्नुहुन्छ।
२०pt स्पष्ट PVC को ठोस अनुभूति, स्पष्ट वा फ्रोस्टेड PVC प्रयोग गर्ने आधुनिक डिजाइन सौंदर्यको साथ तपाईंको ग्राहकहरूलाई यस्तो आभास दिन्छ कि तपाईंसँग उच्च स्तर छ, र त्यसैले गुणस्तरीय उत्पादन वा सेवा प्रस्ताव गर्नुपर्दछ।
नि: शुल्क गोल कुनाहरू
किनभने हाम्रो २० pt पीवीसी कडा छ, हामी प्रस्ताव गर्दछौं पूरक गोलाकार कुनाहरू यी व्यवसायिक कार्डहरूको लागि यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि स्पष्ट कार्डहरू चलाउँदा तपाईं वा तपाईंको ग्राहकहरूले आफैलाई चोट पुर्याउने छैन। तपाईको 1 / 8in वा 1 / 4in कोना को दायरा को छनौट, कुनै अतिरिक्त लागत बिना।
यद्यपि हामी म्याग्नेट स्ट्रिपहरूसँग स्पष्ट कार्डहरू प्रस्ताव गर्दैनौं, हाम्रा धेरै ग्राहकहरूले सामान्य सदस्यता कार्डहरूको लागि हाम्रो अपारदर्शी सेतो पीवीसी व्यवसाय कार्डहरू प्रयोग गर्छन्।
तपाइँको कार्ड डिजाइनको पछाडि एउटा खाली ठाउँ छोड्दै, तपाइँ स्थायी मार्कर वा शार्पी प्रयोग गरी ग्राहकको नाम लेख्न सक्षम हुनुहुन्छ।
उदाहरणको लागि, यदि तपाईंसँग एक प्रयोग गरिएको रेकर्ड स्टोर छ भने, तपाईं एक 'वफादार ग्राहक प्रोग्राम' वा एक पटक वार्षिक शुल्कको लागि सदस्यता प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूलाई उनीहरूको सुपर कूल प्लास्टिकका सदस्यहरू मात्र कार्ड देखाउँदा प्रत्येक अर्डरमा १०% दिन्छ।
अर्को चाखलाग्दो अनुप्रयोग भनेको हाम्रो स्पष्ट कार्डहरू ट्याग ट्यागको रूपमा प्रयोग गर्नु हो। धेरै टी-शर्ट ब्रान्डहरू र स्टार्ट-अप कपडा कम्पनीहरूका लागि, स्पष्ट ट्यागहरू तपाईंको पोशाकलाई भिजुअल एज दिन एक सजिलो तरीका हो।
जे होस् यहाँ प्रस्तुत मूल्य निर्धारण मा समावेश गरीएको छैन, हामी छेद ड्रिलिंग सेवा प्रस्ताव गर्दछौं जसले तपाईको स्पष्ट कार्ड सजिलै सुपर ग्रुभि ह्या hang ट्यागमा परिणत गर्दछ।
प्लास्टिक व्यापार कार्ड सम्बन्धित रोचक लेख
प्लास्टिक व्यवसाय कार्डको पावर: Swanky को पुनः परिभाषित गर्नुहोस्
कागज वा प्लास्टिक? यो एक उमेर पुरानो प्रश्न हो जुन हामी किराना स्टोर चेकआउट लाइनमा आशा गर्न आएका छौं। अझै, अब यो तपाइँको ब्यापार कार्डहरूमा पनि लागू हुन्छ! जबकि त्यहाँ सँधै उत्कृष्ट-गुणवत्ताको कागज कार्डहरूको लागि ठाउँ हुनेछ, आजका नवीन नयाँ डिजाइनहरू र अप्रत्याशित सामग्रीहरू कर्पोरेट जगतलाई आँधीबेहरीले घेरेका छन्। यस्तो उदाहरण? … थप पढ्नुहोस्
FAQs - प्लास्टिक बिजनेस कार्डहरू
के प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू जलरोधक छन्?
हो। प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू अहिले प्रवृत्तिमा छन्, किनकि तिनीहरू परम्परागत कागज कार्डहरू भन्दा अधिक टिकाऊ र अद्वितीय देखिन्छन्। सामान्यतया लचिलो तर कडा पीवीसी प्लास्टिकले बनेको, यी व्यवसायिक कार्डहरू तीखो देखिन्छन् यदि तपाईंले यसलाई पानी, कफी, र अन्य तरल पदार्थहरूमा प्रकट गर्नुभयो भने। र यसले यसको आकार राख्दछ यदि यसलाई एक ... मा राखिएको छ भने थप पढ्नुहोस्
के म तपाईंको प्लास्टिक कार्डहरूमा डबल साइड प्रिन्ट गर्न सक्छु?
हो - तपाईं आफ्नो प्लास्टिक कार्डमा डबल-साइड प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको दुबै पक्षमा तपाइँको २० pt र p० pt मोटा सेतो प्लास्टिक कार्डहरू छाप्न सक्नुहुन्छ। तपाईं 20० pt स्पष्ट वा फ्रोस्टेड प्लास्टिक व्यवसाय कार्डमा पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईं २० pt खाली वा फ्रोस्टेड कार्डमा डबल-पक्षीय प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्न।
के तपाईहरू प्लास्टिकको उपहार कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ चुम्बकीय पट्टीबाट?
हो, यद्यपि यो हाम्रो साइटमा द्रुत आदेशको लागि प्रस्ताव गरिएको छैन (किनकि परियोजनाहरू व्यापक रूपमा भिन्न हुन सक्दछन्), हामी यसलाई कस्टम अर्डरको रूपमा प्रस्ताव गर्दैनौं। मूल्य निर्धारण गर्न, केवल हाम्रो अनुकूलन उद्धरण फारम भर्नुहोस् - यहाँ
म कसरी प्लास्टिकमा छापिएका उत्पादनहरूका लागि डिजाइन गर्छु?
जब तपाईं प्लास्टिक कार्डहरू डिजाइन गर्नुहुन्छ तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि स्पष्ट प्लास्टिक कार्डहरू र फ्रोस्टेडहरू पारदर्शी छन्। र, राउन्ड कुनाहरू भएको प्लास्टिक कार्डहरूमा कुनै अतिरिक्त चार्ज हुँदैन! पारदर्शिता मा भिन्नता माथि देख्न सकिन्छ। स्पष्ट कार्डहरू (दाँयामा) पारदर्शी छन्। फ्रुस्टेड कार्डहरू (केन्द्रमा) अर्ध पारदर्शी छन् ... थप पढ्नुहोस्
तपाईं प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरूको लागि के आकार र आकारहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
हाम्रो आधारभूत प्लास्टिक व्यवसाय कार्डहरू sha आकार र आकारमा आउँदछ: मानक, स्क्वायर, मिनी, र ओभल। प्रत्येक विकल्पको लागि, तपाईं स्पष्ट पालेको पारदर्शी र सेतो प्लास्टिक बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सबै व्यापार कार्डहरू पूर्ण रंगमा उच्च गुणवत्ताको कागजमा मुद्रित छन्। यहाँ तपाइँका सबै विकल्पहरू छन्: मानक: २ "x4"… थप पढ्नुहोस्
किन सबै प्लास्टिक कार्डहरूमा गोलाकार कुनाहरू छन्?
अधिक, यदि सबै हैन भने, व्यापार कार्डसँग गोलाकार कुनाहरू छन्। त्यो किनभने तीतो सूचक किनारहरूले सम्भवतः छाला पंचर र अन्य चोटपटकमा परिणाम दिन सक्छ जुन कागज कटौती भन्दा बढी गम्भिर हुन्छ। हामी मध्ये धेरैले हाम्रो व्यापार कार्ड नजिकै राख्न मनपराउँदछौं, हामी सँधै तपाईको प्लास्टिक कार्डहरूको तीखा कुनाहरू नरम पार्ने सल्लाह दिन्छौं। यो हो ... थप पढ्नुहोस्
किन मेरो प्लास्टिकको कार्डमा प्रिन्ट यति उज्यालो छ?
प्लास्टिक कार्डहरू पारदर्शी सामग्रीबाट बनेका छन्। जब प्रकाश तिनीहरू मार्फत जान्छ, अगाडि छापिएको छवि हल्का, नरम, र म्यूट गरीन्छ। यदि तपाईं अधिक इंद्रधनुषी प्रिन्टहरू चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो प्रीमियम p० pt फ्रोस्टेड प्लास्टिक कार्डहरू हाम्रो मानक विकल्पहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हुनुपर्दछ। तपाईं सेतो ब्लकको अतिरिक्त तह थप्न सक्नुहुन्छ ... थप पढ्नुहोस्